Lasibatry ny manampahefana ao Hong Kong ny fanabeazana ka manivana ny tenany ireo mpampianatra · Global Voices teny Malagasy
Ataon'i Beijing ho toeram-pifehezana ara-politika ny toeram-pianarana
Voadika ny 04 Novambra 2020 7:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Deutsch, Español, polski, Português, Ελληνικά, English
Ity no fizarana fahatelo amin'ny tantara, navoaka voalohany tamin'ny teny shinoa, tao amin'ny The Stand News. Nadikan'ny Global Voices tamin'ny teny anglisy izy ity ary havoaka eto ao anatin'ny fizarana dimy rehefa nahazoana alalana. Vakio ny fizarana voalohany, faharoa, sy fahatelo.
Mitaky amin'ny governemanta ny andininy faha-9 amin'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena (NSL) any Hong Kong mba handray ireo fepetra ilaina hanamafisana ny fifandraisana amin'ny vahoaka, ny fitarihana, ny fanaraha-maso ary ny fitantanana any an-tsekoly, ny fikambanana ara-sosialy, ny haino aman-jery ary ny aterineto.
Satria iray amin'ireo vondrona ara-tsosialy navitrika indrindra tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana tamin'ny herintaona ny tanora mpianatra, raisin'ireo manampahefana ho zava-dehibe ny mifehy ny efitrano fianarana.
Fotoana fohy taorian'ny nampiharana ny NSL tamin'ny volana Jolay, nanitsy ireo boky fampianarana ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany ny biraon'ny fanabeazam-pirenena any Hong Kong mba hanesorana ny foto-kevitra momba ny “tsy fankatoavana sivily” sy ny “fisaraham-pahefana.” Nametraka torolalana ho an'ireo mpitantana sekoly ny birao mba hampianatra ny mpianatra momba ny fiarovam-pirenena, amin'ny fanamafisana fa andraikitry ny sekoly ny manamafy ny “fahatsapan'ny mpianatra ny maha-firenena azy”.
Mba hiantohana ny mpampianatra tsy hiala amin'ny fandaharam-pianarana, nilaza ny sekretera misahana ny fiarovana ny tanàna, John Lee Ka-chiu fa hohamafisin'ny manampahefana ny fitantanana ny sekoly ary esorina ny “paoma lò”, manondro ireo mpampianatra izay voalaza fa manao fahadisoana arakasa. Ny teny hoe “paoma ratsy” koa dia nampiasain'i Carrie Lam tamin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra, ho an'ny mpampianatra iray izay naato maharitra ela rehefa namorona takelaka miresaka momba ny fahaleovantenan'i Hong Kong.
Teo anelanelan'ny volana jona 2019 sy aogositra 2020, nahatratra 247 ny fitarainana voarain'ny Biraon'ny Fanabeazam-pirenena momba ny fihetsika na ny fanehoan'ny mpampianatra ireo hetsika ara-politika nitranga tao Hong Kong; tranga sahabo ho 131 no noheverina ho manana fahamendrehana ary hanaraka ireo hetsika mifanaraka amin'izany ny Birao. Hatreto, dia nanome fampitandremana am-bava sy an-tsoratra ho an'ireo mpampianatra am-polony ny Birao, izay homarihina ao amin'ny firaketana ny asan'ny mpampianatra.
Ankoatra ireo fepetra andrim-panjakana, nanetsika ireo tsy mivadika aminy koa i Beijing mba hanampy amin'ny fanadiovana. Nandrisika ny vahoaka ny Lehibe Mpanatanteraka teo aloha Leung Chun-Ying mba hametraka fitarainana momba ireo mpampianatra amin'ny alalan'ny fampiasàna ny 803 Action Fund, sehatra an-tserasera natsangany izay manome valisoa ho an'ireo izay manome torohay manamora ny fisamborana sy ny fanenjehana ireo olo-malaza mpomba ny demaokrasia kendrena. Nanomboka ny volana aogositra 2019, nanambara ny vatsy fa hanome valisoa 100 000 dolara Hong Kong [eo amin'ny 12903 dolara amerikana eo ho eo] ho an'ireo izay manome torohay momba ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny mpampianatra.
Tao amin'ny Facebook, vao haingana i Leung no nandefa ny lisitr'ireo mpampianatra 18 voasambotra noho ny hetsika fanoherana ary voampanga ho nanao fanakorontana, fandoroana trano, herisetra tamin'ny polisy, ftazonana fitaovam-piadiana, fahavoazana noho ny heloka bevava, fivoriana tsy ara-dalàna, sy maro hafa. Ahitana ny anarana, ny taona, ny asa, ny sekoly ampianaran'izy ireo, ary ny fiampangana azy ireo ny torohay ao amin'ilay lisitra. Nivoady izy fa hampiharihary ireo anarana sy antsipirihany bebe kokoa momba ireo mpampianatra mpanohitra ny governemanta amin'ny alàlan'ny 803 Action Fund.
Ny volana Mey, nanomboka hetsika mitovy amin'izany antsoina hoe Save the Children ny depiote mpomba an'i Beijing Julius. Nambarany fa nanangona mpilatsaka an-tsitrapo miisa 300 ny vondrona mba hampiseho ireo fomba fanao «tsy matihanina» eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ary hanangona ireo taratasy fiasàna ireo mpanao fanadihadiana no handrakitra ny fampianarana. Tamin'ny volana Jona, nilaza i Ho fa nanangona tranga mihoatra ny 20 ny vondrona tao anatin'ny iray volana.
Tamin'ity volana ity, nametraka laharana finday ho an'ny ray aman-dreny ny federasionan'ny sendikan'ny varotra Hong Kong mpomba an'i Beijing mba hametraka fitarainana momba ny “fitondran-tena tsy mendrika” ataon'ny mpampianatra. Ny famaritana ny fomba fanao na fitondran-tena tsy matihanina, hoy ny Federasiona dia manomboka amin'ny fanangonan-tsonia ho fanoherana ny governemanta,hatramin'ny takelaka heverina ho tsy mendrika na lahatsoratra media sosialy izay maneho fijery manokana momba ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Brian (anarana sandoka) dia mpampianatra teny shinoa ao amin'ny kilasy ambaratonga faharoa. Taloha izy nandefa lahatsoratra tamin'ny tena anarany tao amin'ny sehatra an-tserasera, saingy vao haingana kosa namafa lahatsoratra navoaka. Tao anatin'izay roa taona lasa izay dia naharay fitoriana telo na efatra izy noho ny asany an-tserasera izy. “Hitondra fitoriana anao ny fanonona fotsiny ny ‘polisy’ nefa tsy misy fikasana hanevateva azy ireo,” hoy izy tamin'ny The Stand News.
Iray amin'ireo fitoriana napetraky ny tsy fantatra anarana taminy tany an-tsekoly, hoy i Brian, ny momba ny filazany tamin'ny mpianatra iray hoe, “Tsara ny mahita anareo tafody soa aman-tsara any an-trano” (返屋企 ， 冇 事 就好) taorian'ny nialàny ny toeram-pihetsiketsehana .Nitaky fanazavana an-tsoratra ny birao fanabeazam-pirenena, hoy ihany izy, noho ny filazana voalaza fa “tsara ny mody rehefa avy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana voaràran'ny governemanta.”
Nandalo fifanakalozana an-tsoratra telo hatreto ny fitoriana. Notakiana i Brian mba hanohana ny fanazavany amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpiara-miasa aminy, ny mpianatra ary ny ray aman-drenin'izy ireo. “Ny dingana iray manontolo dia ny milaza amin'ny sehatry ny fanabeazana fa lasibatra ianao sy hahatonga anao hatahotra,” hoy izy.
Tamin'ny volana Janoary, nanomboka nanery ireo mpitantana ny sekoly ny birao fanabeazana ao Hong Kong mba hanalavitra ny politika ao amin'ny tobim-pianarana. Miaraka amin'ny fanambaràna ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena ny volana Mey, nitombo ny tsindry.
Nasehoan'ny tranga manan-tantara tamin'ny volana Jiona izany, izay nandroahana mpampianatra sekoly ambaratonga faharoa iray noho ny famelana ny mpianatra hitendry ilay hira fanoherana malaza “Glory to Hong Kong (Voninahitra ho an'i Hong Kong)” tamin'ny fanadinana mozika.
Tamin'io volana io ihany, nanambara ny halehiben'ny fifehezana ara-politika ny fanadihadiana nataon'ny Sendikan'ny Mpampianatra Matihanina ao Hong Kong: Tamin'ireo olona 1.185 namaly, izay samy miasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana avokoa, nilaza ny 84,1 isanjato fa nanao “fanerena goavana” teo amin'ny sehatry ny fampianarana ny governemanta, raha nihevitra kosa ny 91,8 isan-jato fa hisy fiatraikany ratsy amin'ny hoavin'ny fanabeazana ny fivoarana ankehitriny.
Na dia nilaza aza ny 91,1 isanjaton'ireo namaly fa tsy nanaiky ilay hevitra hoe tsy tokony haneho fomba fijery politika ao amin'ny media sosialy ny mpampianatra, nilaza ihany koa ny 64,6 isan-jato fa nahenan'izy ireo ny hetsika amin'ny media sosialy, ary misy ny manapa-kevitra ny hanidy tanteraka ny kaontiny. Mandritra izany fotoana izany, 59,1 isanjato no nanomboka tsy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana sy fivoriambe nahazo alàlana.
Ankoatra izay, niahiahy ny 78,8 isanjaton'ireo namaly fa hahazo fitoriana izy ireo noho ny fomba fijeriny ara-politika. Nanoratra tamin'ny fanadihadiana ny mpamaly iray fa nametraka fitoriana ny ray aman-drenin'ny mpianatra iray noho ny antony fotsiny hoe nanao sarontava mainty tany an-dakilasy izy.
Mampitaha ny fihazana “paoma ratsy” amin'ny Revolisiona Ara-kolontsaina, endrika fanadiovana ara-politika ny sehatry ny mpanohana ny demokrasia.